17 -ka Madal ee ugu Wanaagsan Bilawga bilowga sanadka 2022 - Wareegga Hantida
Bogga ugu weyn 17 -ka Madal ee ugu Fiican ee Bilawga ah 2022 -ka
Bilaabidda iyo kasbashada madal madax -bannaan waxay la mid tahay aasaasidda shirkad. Waa inaad marka hore kobcisaa khibrad oo aad ballaarisaa faylalkaaga. Intaas ka dib, waa inaad go'aansataa nooca adeegyada aad bixin doonto. Laakiin maxaa dhacaya haddii aad marin u heli karto aaladaha iskood u shaqeysta ee ugu wanaagsan bilowgayaasha?
Si aad u bilowdo xirfad madaxbanaan oo guulaysata, madax -bannaanuhu waa inuu helaa “suuqa saxda ah,” ama kiiskan, “madal -madax -bannaan oo sax ah,” si uu u iibiyo adeegyadooda maalinta ugu horreysa.
Halka khubarada badankood iyo qaar kaloo badan shaqaalaha madaxa -bannaan ee khibrada leh ayaa talo bixiya ka soo horjeedka adeegsiga aaladaha iskood u shaqeysta si ay u bixiyaan adeegyo, waxaan aaminsanahay inay tahay habka ugu wanaagsan ee qof laylis ah ku bilaabi karo xorriyadda.
U adeegsiga goobo madaxbanaan si suuqyada loogu adeego si loo helo shaqooyin wuxuu leeyahay faa'iidooyin iyo khasaare labadaba.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad ka heli karto madal iskii ugu fiican ee nooca shaqadaada ah, waxay noloshaada ka dhigi doontaa mid aad u fudud.
Maqaalkan, waxaan ku tusi doonaa sida loo helo aaladaha iskood u shaqeysta ee ugu fiican si aad ugu fidiso adeegyadaada sidii madax -bannaane cusub.
Kahor intaanan u dhaadhicin taas, aan ku tusno sida loo shaqaaleeyo bilow ahaan.
Sidee Ku Bilaabi Karaa Fdib u eegis?
Helitaanka shaqadaada madaxbanaan ee ugu horreysa waxay noqon kartaa hawl adag. Laakiin, nasiibdarro, sidoo kale waa mid si fudud loola xiriiri karo. Ganacsiyo badan ayaa ka labalabeeya inay shaqaaleeyaan qof runtii deegaan ahaan miyir qaba.
Waxay doorbidaan inay shaqaaleeyaan qof leh taariikh guuleed.
Marka, sidee baad u mareysaa? Xitaa haddii aad ku cusub tahay ciyaarta, sidee baad u degi kartaa macaamiishaada ugu horreysa ee iskood u shaqeysta oo bilaabi karta inaad lacag hesho?
Waa kuwan talooyin kugu hagaya inaad dejiso macmiilkaaga ugu horreeya oo ah hawl -wadeen bilow ah:
1. Tixgeli Xirfadahaaga Jira
Weligaa uma shaqeynin sidii madax -bannaan -bixiye ka hor, sax? Laakiin taasi meesha kama saareyso suurtagalnimada inaad miiska soo dhigto wax waxtar leh.
Tixgeli waayo -aragnimada gaarka ah ee aad leedahay ee kaa caawin karta inaad naftaada ka iibiso macaamiisha suurtagalka ah oo aad naftaada ka soocdo inta kale ee suuqa xorta ah.
Waxaa laga yaabaa in waayo-aragnimadaada dhinaca suuq-geyntu ay kuu oggolaato inaad noqoto musharraxa ugu fiican ee maamuli kara goobtii ugu dambeysay ee cisbitaalka ee xayaysiis.
Mise waxaa laga yaabaa in karti-xirfadeedkaaga Excel ee aad isku sheegtay ay kuu qalmi karto inaad wax ku darsato falanqaynta caafimaadka isbitaalka.
Ha ka baqin inaad ka fikirto meel ka baxsan sanduuqa si aad u hesho xoogaa xirfado iyo xirfado gaar ah oo soo jiidan kara macaamiisha iman kara inay ku shaqaaleeyaan in kasta oo aadan lahayn khibrad madax -bannaan oo caadi ah.
2. Faham Warshadaha Aad Dooratay
Waad ku faraxsan tahay inaad ku bilowdo xirfaddaada madaxbanaan. Si kastaba ha noqotee, si kasta oo aad u faraxsan tahay, waxaa muhiim ah inaad fahanto kartida warshadaha aad dooratay.
Ma jawi adag baa, iyada oo la laayey shaqaale kale oo iskood u shaqeystayaal ah oo isku shaqo u tartamaya?
Shirkadaha xitaa ma shaqaaleeyaan shaqaale madaxbanaan ee qaybtaada, mise waxay doortaan inay shaqaaleeyaan shaqaale?
Waa maxay heerka mushaharka ee gobolkaaga, oo ma kugu filnaan doontaa?
Ogaanshaha sida dhakhsaha leh ee warshadahaagu u kobcayo ayaa kaa caawin doonta inaad go'aamiso cidda aad la xiriirayso iyo meesha aad xoogga saari lahayd raadintaada shaqo ee madaxbannaan.
3. Samee Bogga Shabakadda
Lahaanshaha degel loogu talagalay shirkaddaada madaxbannaan ee cusub waxay kuu oggolaan doontaa inaad muujiso faylalkaaga shaqada halka aad sidoo kale u oggolaanayso macaamiisha mustaqbalka inay ku helaan.
Waxaa loo isticmaali karaa in si dhaqso leh oo sahlan loogu soo bandhigo taariikh nololeedka adiga kugu saabsan, noocyada mashaariicda aad jeceshahay inaad ka shaqayso, shaqada kala duwan ee aad samaysay, qiimeyntaada, iyo macluumaadkaaga xiriirka.
Websaydhku uma baahna inaad noqoto horumariyaha webka. Meelo badan, sida WordPress iyo Wix, ayaa fududeynaya in la soo qaado shaxanka oo la bilaabo.
4. La kulan La -shaqeeye Xor ah
Tixgeli inaad raadsato lataliye ama inaad sugto waraysi xog -waraysi oo lala yeesho qof mar horeba xor u ahaa oo qayb ka ahaa dadaallada isku -xidhkaaga.
La-taliye xirfadeed waa saaxiibtinimo fog oo aad si joogto ah ula kulmi doontaan si aad ugala hadashaan guulahaaga madax-bannaanida iyo guul-darrooyinka.
Wareysiga xog-doonka ah waa hubaal kulan hal mar ah oo lala yeelanayo qof samaynaya waxaad rabto inaad samayso si aad u sheekaysato oo aad su'aalo u weydiiso.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, waxaad heli doontaa fursad weyn oo aad ku hesho talo iyo tusaalooyin ku saabsan sidii aad u dhex geli lahayd bulshada madaxa bannaan.
In kasta oo sababta aad ula hadasho la -taliye ama jadwalka wareysiga xog -ogaalka ah aysan ahayn inay noqoto inaad weydiisato tixraacyo ama shaqo, weligaa ma ogid waxa ka imaan kara xiriirkan.
5. Khibradaada ka horaysii jeegaaga mushaharka
Su'aal la'aan, waxaad go'aansatay inaad iskaa u shaqeyso maxaa yeelay waxaad jeceshahay waxaad sameyso. Laakiin, aan wajahno, waxaad rabtaa inaad xoogaa xoogaa lacag ah sameyso.
Haddii ay tahay dhaqdhaqaaq dhinac ah ama waddo xirfadeed oo waqti-buuxa ah oo cusub, waxaad u baahan doontaa inaad lacag samayso si aad uga dhigto mid qiimo leh.
Taasi gabi ahaanba waa la fahmi karaa.
Xitaa haddii aad leedahay khibrad sannado badan oo xirfaddaada ah, way adkaan kartaa inaad ku dallacdo adeegyo aad u sarreeya marka aad bilowdo.
Si aad tan uga hortagto, isku day inaad ku qiimeyso khibradda qiimayn ka badan lacagta aad heli karto.
In kasta oo miisaaniyadda mashruuca horumarinta webka laga yaabo inay ka yaraato intii aad filaysay, miyuu ku siin doonaa xiriiro aad loogu baahan yahay goobtaada?
Ama daabacaadda wargeysku waxay diyaar u tahay inay bixiso kharash yar.
Way adkaan kartaa inaad iska ilaaliso rabitaanka inaad ku cadaadiso kharashka aad u qalanto, laakiin isku day inaad dareenkaaga ku hayso sawirka weyn halkii aad ka ilaalin lahayd lambarada jeegaaga mushaharka. Waxay bixin doontaa mustaqbalka fog.
6. Isticmaal Xiriirradaada
Waxaad mar walba maqli jirtay maahmaahdii hore, “Mar walba ma aha waxaad taqaan, laakiin waa taad taqaan.”
Iyo, in kasta oo ay kaa dhigi karto inaad indhahaaga rogto, dhab ahaantii waxay kuu noqon kartaa kaalmo aad u weyn marka ay timaaddo bilaabista xirfaddaada xorta ah.
Waa maxay sababta tan?
Maadaama suuq-geynta afka laga yaabo inay noqoto waxa kaliya ee aad u baahan tahay si aad uga dhaadhiciso qaar ka mid ah macaamiisha iman kara inay fursad kuu helaan, inkasta oo aadan lahayn khibrad badan.
Waxaad aad ugu dhowdahay inaad cagtaada gasho albaabka oo aad saamayn ku yeelato marka uu kuu soo jeediyo macaamiisha qof ay ku kalsoon yihiin shabakadooda.
Xirfaddee ayaa ugu fiican Freelancing?
Sababtoo ah waa mid aad u fudud, freelancing waa mid ka mid ah meheradaha ugu wanaagsan ee la bilaabi karo 2022. Waxaad u adeegtaa oo aad lacag ku bixisaa.
Taasi waa wax walba oo jira.
Si kastaba ha ahaatee, waxay qasab ku tahay lahaanshaha awoodda suuqa lagu iibin karo marka hore. Xirfad ay shaqo -bixiyeyaashu si dhab ah u rabaan oo si uun qiimo ugu keenaysa shirkadooda.
Halkan, waxaan ku mari doonnaa oo kaliya shaqooyinka ugu caansan ee iskood u shaqeysta ee laga heli karo khadka tooska ah, laakiin sidoo kale xirfadaha madax-bannaan ee aadka loo dalbado ee loo-shaqeeyayaashu raadsadaan 2022.
Waxaan hubinnaa in waqti kasta oo lagu qaato barashada xirfadahaan ay aad u mudan tahay, oo aadan u baahnayn inaad waqti badan ku lumiso shaqo raadinta taas darteed.
Waa kuwan xirfadaha ugu caansan uguna wanaagsan ee madax -bannaanida:
Maamulka Warbaahinta Bulshada (SMM)
Horumarinta Webka iyo Mobile -ka
Tababar / Tababarid
Dib u Qor Qorista
Waa kuwee Platform Freelan ugu Fiican Bilawga sanadka 2022?
FreeUp wuxuu isku xiraa milkiilayaasha meheradda oo leh shabakad gacanta lagu soo xushay oo ka mid ah kuwa madaxa-bannaan ee ugu sarreeya eCommerce, suuqgeynta dhijitaalka ah, abuurista shabakadda, iyo beero kale oo kala duwan oo horayba loogu hubiyay khibrad, dabeecad, iyo isgaarsiin.
Kumanaan qof oo iskood u shaqeystayaal ah ayaa la shaqaaleeyaa, la wareystaa, lana hubiyaa isbuuc kasta xirfadahooda, isgaarsiintooda, iyo dabeecadooda.
Si kastaba ha noqotee, waxay aqbalaan kaliya 1% ugu sarreeya ee codsadayaasha, iyagoo hubinaya inaad si dhaqso leh u heli karto kan ugu fiican!
Halkii ay ka ahaan lahayd toddobaadyo ama bilo waxay u baahan tahay in lagu shaqaaleeyo sida Fiverr iyo Upwork, waxaa lagu shaqaaleeyaa maalmo gudahood.
Dhab ahaantii, 24 saacadood gudahood, waxay kula midoobi doonaan codsade ku habboon oo ku habboon sharraxaadda shaqada, oo kuu oggolaanaya inaad si dhakhso leh u shaqayso si ka duwan sidii hore.
Ma jiraan aalado kale oo u muuqda sida Freeup, maadaama ay tahay mid ka mid ah aaladaha ugu madax -bannaan ee internetka ee bilowga ah.
CloudPeeps waa beel, suuq iyo madal awood u siisa shaqaalaha madaxa -bannaan iyo ganacsiyada inay qabtaan shaqadooda ugu fiican.
Waxay ku xiraan macaamiisha ugu sarreysa shaqaalaha xorta ah ee la aamminsan yahay iyo bixiyeyaasha adeegga xirfadda leh hal goob oo ka dhigaysa maareynta shuraako, lacag -bixinno, iyo kuwo ka sii fudud.
Macaamiisha iyo Peeps waxay si toos ah u dejin karaan oo ay uga wada xaajoon karaan qiimaha, iyaga oo u oggolaanaya shuraako dabacsan wakhti kasta.
Iyada oo ku xidhan nooca shaqada la qabanayo, shaqooyinka ayaa loo samayn karaa siyaabo kala duwan.
Macaamiishu waxay u isticmaali karaan CloudPeeps lacag la'aan si ay u shaqaaleeyaan dadka iyo shaqada kadib. Intaa waxaa dheer, CloudPeeps waa mid ka mid ah aaladaha ugu madax -bannaan ee khadka tooska ah ee bilowga ah.
Toptal waa shabakad caalami ah oo ka mid ah soosaarayaasha softiweerka ugu madax -bannaan ee ugu wanaagsan adduunka, naqshadeeyayaasha, khubarada maaliyadda, maareeyayaasha wax soo saarka, iyo maareeyayaasha mashruuca.
Waa shabakada aduunka ugu wayn uguna baahsan ee loo qaybiyo warshadaha ugu sareeya, naqshadaynta, iyo hibada tignoolajiyada, diyaarna u ah inay qaataan mashaariicda ugu muhiimsan.
Helitaanka shaqooyinka goobtan waa mid dabacsan maadaama shirkadaha ugu sarreeya ay shaqaaleysiinayaan Toptal freelancers mashruucyadooda ugu muhiimsan.
In ka yar 48 saacadood, qof kasta waad kiraysan kartaa. Ma jiraan wax xaddidaad ah inta aad kor u qaadi kartid ama hoos u dhigi kartid.
Tan ugu muhiimsan, waxay bixiyaan ballanqaadyo joogto ah, maalin kasta, toddobaadle ah, iyo waqti-buuxa ah.
Si kastaba ha noqotee, codsade kasta oo shabakadda Toptal oo cusub ayaa si fiican loo baaray oo loo hubiyay. Habka shaqaalayntooda adag waxay keenaysaa boqolkiiba 98 tijaabo-ku-kiraysi.
Intaa waxaa dheer, Toptal waa mid ka mid ah aaladaha ugu madax -bannaan ee bilowga ah.
Markaa, waa inaad dusha sare ka joogtaa ciyaarta.
goLance wuxuu isku xiraa milkiilayaasha meheradaha iyo ganacsatada si ay ula kulmaan adduunyo karti leh. Waa mid ka mid ah mareegaha internetka ee iskood u shaqeysta ugu fiican ee bilowga ah.
Haddii aad u baahan tahay koox ama koox naqshadeeyayaasha webka si ay u dhisaan shirkaddaada internetka,
ama laga yaabee inaad haysato warqad waxbarasho oo ku eg Isniinta, goLance waxay leedahay khubaro qiimeyn sare leh oo leh awoodaha iyo waayo-aragnimada lagama maarmaanka u ah inay kaa caawiyaan hore u socoshada.
Waxay aqoonsadaan muhiimadda lahaanshaha sumcad wanaagsan oo onlayn ah. Sidaa darteed, si loo hubiyo tayada adeegga ugu sarraysa, bulshadoodu waxay ku tiirsan tahay isla -xisaabtanka iyo nidaam dib -u -eegis lagu kalsoonaan karo.
Sidoo kale, waxay sidoo kale sameeyaan qiimeynta awoodda. Tani waxay ku lug leedahay garashada, daacadnimada, iyo tijaabinta hal -abuurka si loo hubiyo in shaqaalaha madaxa -bannaan ee ugu fiican ay ku habboon yihiin baahiyahaaga.
goLance waxay kaa caawineysaa inaad si hufan u maamusho shirkaddaada iyadoo kuu oggolaaneysa inaad u isticmaasho isla magaca isticmaale dhowr shirkadood iyo mashaariic. Waxaad ku maamuli kartaa dhammaan barnaamijyadaada, lacag -bixinta, iyo hawlaha maamulka hal meel.
PeoplePerHour waa madal ka caawisa dadka adduunka oo dhan inay ogaadaan riyooyinkooda xirfadeed iyagoo ka caawinaya inay shirkad ka bilaabaan dhulka oo ay noqdaan kuwo dhaqaale ahaan iyo xirfad ahaanba isku filan.
Marna ma jirin waqti ka wanaagsan oo aad internetka ku gasho oo aad bilowdo inaad lacag kasbato adoo adeegsanaya xirfadahaaga si fiican loo habeeyay.
U shaqee wakhti buuxa, wakhti dhiman, ama dabacsanaan marka ay kuu adeegto. Waxaad si buuxda gacanta ugu haysaa wax walba oo ku jira PeoplePerHour, oo ay ku jirto qiimahaaga.
Macmiilku waxay shaqaalaysiin karaan khubaro madaxbanaan saacad ama mashruuca iyagoo adeegsanaya PeoplePerHour.
Waxay isku xireen in ka badan 1 milyan oo macaamiil ah iyo shaqaalaha madaxa -bannaan ilaa hadda, waxayna ku dallaceen in ka badan £ 100 milyan shaqaalaha madaxbanaan.
Iyada oo la socota PeoplePerHour, waxaan u malayneynaa inaad wax ku jirto. Intaa waxaa sii dheer, PeoplePerHour waa mid ka mid ah shabakadaha iskood u shaqeysta ee ugu wanaagsan ee bilowga ah.
Marna ma sahlaneyn in shaqada laga qabto PeoplePerHour:
Daqiiqado gudahood, waxaa lagugu lammaanayn doonaa iibsadayaal khabiir ah.
Kooxda taageerada macaamiisha ee u heellan 24 saac maalintii, 7 maalmood toddobaadkii
Caymiska khiyaanada ka-hortagga iyo dammaanadda lacag-celinta
Wax badan ka hel PeoplePerHour kuna noolow riyadaada shaqada.
Outsourcely waa barxad isku xirta shirkadaha iyo ganacsatada leh shaqaale fog oo xirfad leh oo ka kala yimid adduunka oo dhan. Waxaa jira in ka badan 400000 oo shaqaale fog iyo in ka badan 50000 meheradood gudaha Mareykanka.
Waa mid ka mid ah mareegaha internetka ee iskood u shaqeysta ugu fiican ee bilowga ah.
Tani waa sida ay ugu shaqayso shaqaalaha madaxa -bannaan:
Samee astaan ​​muujinaysa kartidaada, aqoontaada, iyo khibraddii shaqo ee hore.
U oggolow bilowga inay ku helaan markay raadinayaan dad leh khibrad iyo waayo -aragnimo.
Codso boosas furan oo ku soo wargeli email ahaan marka jagooyin cusub oo u dhigma shahaadooyinkaaga la heli karo.
Bilowga ayaa markaa si toos ah kula soo xiriiri doona si aad u bilowdo habka wareysiga adiga oo adeegsanaya wada sheekeysi gaar ah ama emayl.
Bilaabashadu waxay toos kuugu bixin karaan kanaal la isku raacay markii lagu qoro. Tani waxay kaa caawineysaa inaad ilaaliso dhammaan dakhliga ku soo gala.
Si ka duwan Upwork, shaqaalaha durugsan waxay 100% mushaharkooda guud ku qaataan Dibadda.
Aquent's Cloud-based software waxaa si gaar ah loogu talagalay in lagu siiyo hogaamiyaasha wakaalada gudaha hab ay u maareeyaan suuqgeynta iyo dadka hal abuurka leh, hababka, waqtiyada kama dambaysta ah, iyo keenista.
Wakaalad madaxbanaan ahaan, Aquent waxay heshay abaalmarino dhowr ah. Websaytka madaxa-bannaan ayaa caan ku ah inay siiyaan shaqaale heer sare ah hal-abuurnimo, warbaahinno badan, iyo suuq-geyn.
In kasta oo Aquent ay xustay inay doorbidaan dadka leh khibrad 2+ sano ah, haddana ardayda qalin jabisay waa la soo dhaweynayaa inay eegaan boosaska ay hayaan.
Haddii aadan hubin inta kartidaadu u qalanto, waxaa jira xisaabiyaha magdhawga si uu kaaga caawiyo inaad ogaato.
Intaa waxaa dheer, Aquent waa mid ka mid ah websaydhada iskood u madax -bannaan ee ugu wanaagsan bilowga ah.
#8. Qore Kuleejka
Arday kasta iyo arday dhowaan qalin jabiyay, sida uu qabo Qoruhu Kulleejku, wuxuu xaq u leeyahay xirfad guulaysan.
Sidaa darteed, waxay ka go'an tahay inay siiyaan codsade aad u wanaagsan iyo is -dhexgalka qorista.
Liisaska shaqadooda iyo xalalka kale ee warbaahineed ee wax-ku-oolka ah ayaa ka caawiya ardayda tayada sare leh iyo kuwa dhowaan qalin-jabiyay inay helaan waqti-dhiman, xilli-shaqo, shaqo-barasho, iyo fursado shaqo heer-gelitaan oo baaxad leh.
Ardayda iyo qalin-jabiyayaashii ugu dambeeyay ee dhammaan 7,400+ kulliyadaha iyo jaamacadaha, jaamacadaha iyo jaamacadaha waxay adeegsadaan Qorista Kulliyadda si ay u raadsadaan layliyo, shaqo waqti-dhiman ah, shaqo xilliyeed, iyo fursado shaqo heer-galitaan.
Intaa waxaa sii dheer, Qorista Kuleejku waa mid ka mid ah websaydhada iskood u madax -bannaan ee ugu wanaagsan bilowga ah.
Haddii aad tahay arday, tani waxay noqon kartaa madal aad raadinayso.
99designs waa adeega naqshadeynta garaafka ee Vistaprint. Waa mid ka mid ah shabakadaha iskood u shaqaysta ee internetka ugu fiican ee bilowga ah.
Waxay ka dhigaan mid fudud in lala kaashado xirfadlayaal, khubaro hal -abuur leh oo ka kala yimid adduunka oo dhan si loo horumariyo astaantaada iyada oo loo marayo naqshad gaar ah oo xusuus leh.
99designs waa madal si fiican loo yaqaan oo leh taageero aad u wanaagsan oo u oggolaanaysa milkiilayaasha meheradda inay si dhakhso leh u helaan naqshadda saxda ah ee shirkadooda.
Iyaga, daboolka buuggu wuxuu ahaa qayb muhiim u ah guusha buugga. Sidaas darteed, waxay ku aaminaan khubaro aadna ugu faraxsan natiijada.
Is -qoristooda waa mid aad u fudud oo dabacsan.
#10. Gigs Qorista Madaxbanaan
Qoraalka Madaxa -bannaan Gigs waa degel madax -bannaan oo bilowga ah oo ay ku jiraan shaqooyin kala duwan sida blogger -ka martida, la -taliyaha warbaahinta, maamulaha xoog -iibiyaha, iwm.
Guddiga Shaqada Qorista ee Madaxbanaan ayaa maalin walba la cusbooneysiiyaa shaqooyin qoris madax -bannaan oo cusub iyo shaqooyinka baloogga.
Laga soo bilaabo shaqooyinka qorista ee onlaynka ah ilaa shaqooyinka goobta waqti-dhiman ilaa layliyo-adiga ayay kuu hayaan.
Asal ahaan, waxay qabtaan shaqada raadinta si aadan u baahnayn! Intaa waxaa dheer, waxaa loo arkaa mid ka mid ah kuwa ugu fiican shabakadaha internetka ee iskood u shaqeystayaasha bilowga ah.
Waxaad ka heli kartaa shaqooyin madalkan oo u dhexeeya Telecommuting, Jobs Writing, Jobs Content Jobs, Editing Jobs, Blogger Jobs, Jobs Publishing Jobs, Jobs Tech Jobs.
#11. Helitaanka Qoraaga
Helitaanka Qoraagu waa madasha ugu fiican ee loogu talagalay kuwa bilowga ah ee iskood u shaqeysta. Waxaa ku jira dhammaan noocyada shaqada qorista, sida baloogyada internetka, daraasadaha kiisaska, iyo waraaqaha farsamada.
Ku biir xubnaha 26000+ WriterAccess kuwaas oo ku tiirsan iyaga si ay u helaan qoraayaal madax-bannaan oo heer sare ah, tifaftireyaal, istaraatijiyayaal, iyo turjumaanno si ay uga caawiyaan baahiyaha shirkaddaada ama wakaaladdaada.
Websaydaan madaxbannaan wuxuu bixiyaa qalabyo kala duwan oo kaa caawiya inaad si dhakhso leh u qabato shaqo badan, oo ay ku jiraan falanqaynta maadada, kobcinta ereyga muhiimka ah, iyo qorsheeyaha maadada.
Dheeraad ahaan, Helitaanka Qoraagu waa mid ka mid ah aaladaha ugu madax -bannaan ee khadka tooska ah ee bilowga ah.
#12. Si Kaliya Loo Shaqaaleeyay
Mid ka mid ah astaamaha ugu wanaagsan ee Simply Hired waa awoodda lagu raadin karo shaqooyinka madaxa bannaan ee agagaarkaaga.
Waxaa jira xitaa liiska mushaharka ugu sarreeya iyo hab lagu qiyaaso khidmaddaada.
Tani waxay faa'iido u leedahay dejinta halbeegga mashruuc gaar ah.
Waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa websaydhka si aad u dhisto resume oo aad wax badan uga baratid baloogooda. Kaliya ka dooro maktabadda 30+ tusaalooyin dib-u-bilaw bilaash ah iyo tusaalooyin tusaalooyin qoraal-xirfadeed-gaar ah.
Raadinta kan ugu fiican, Simply Hired waa mid ka mid ah aaladaha ugu madax -bannaan ee khadka tooska ah ee bilowga ah.
Qorayaasha Gig waa mid ka mid ah aaladaha ugu madax -bannaan ee ugu wanaagsan bilowgayaasha raadinaya meel ay ku iibiyaan tayadooda.
Ku biir kooxdan qorayaasha iskood u shaqeysta si aad u hesho marin aan xad lahayn oo ah gigs bixinta, iyo sidoo kale bixinta degdegga ah iyo nidaamka lacag bixinta fudud.
Tan ugu muhiimsan, qorayaashu uma baahna inay bilaabaan barnaamij cusub. Waxay qoraan oo soo saaraan iyagoo adeegsanaya CMS -ga lagu dhex dhisay (Nidaamka Maaraynta Maaddada).
Kani waa mid ka mid ah aaladaha ugu wanaagsan ee qorista madaxa -bannaan ee bilowga ah.
Guru waa goob madaxbanaan oo gacan ka geysata horumarinta astaanta dadka cusub. Shaqaaluhu waxay ka shaqayn karaan bangiyada, suuqgeynta, injineernimada, maamulka, iyo beeraha kale ee mareegahaan.
Waa mid ka mid ah goobaha ugu wanaagsan ee freelancing ee bilowga ah maadaama ay ku siiso hab ku habboon loo-shaqeeyayaasha mustaqbalka si ay ku soo gaaraan.
Maalin kasta, mareegtan waxay daabacdaa tiro badan oo shaqo -furis ah. Guru wuxuu ka jaray 5% ilaa 9% abaalmarinta aad kasbatay ka dib markii aad si guul leh u dhammaysay hawlgalkii.
Ma jiro madal kale oo sidan oo kale u taagan, maaddaama ay tahay mid ka mid ah aaladaha ugu madax -bannaan ee internetka ee bilowga ah.
Iyada oo leh 32 milyan oo isticmaaleyaal diiwaangashan, degelkan iskood u shaqeysta ayaa ah suuqa ugu badan ee dadku ka soo baxaan.
Waxa jira kumanaan shaqo oo la heli karo sidii shaqaale madax-banaan si ay u dhigmaan tiradaas.
Waa mid ka mid ah shabakadaha xorta ah ee ugu fiican ee bilowga ah, oo leh koox u heellan la -taliyeyaal kaa caawin kara inaad si dhakhso leh u shaqaalaysiiso.
Gelitaanka xogta, soo iibinta badeecada, iibinta iyo suuqgeynta, ilaha aadanaha, qorista nuxurka, tarjumaadda xisaabinta, iyo shaqooyin kale ayaa laga heli karaa degelkan.
Waxaad iska diiwaangelin kartaa lacag la’aan halkan, waxaana jira boqolaal shaqo oo maalin walba la dhajiyo.
Kahor intaadan bixin khidmadaha xubinnimada, waxaad heli kartaa 8 codsi oo bilaash ah markaad isdiiwaangeliso oo aad gasho Freelancer.
Waa inaad dalbataa eedeymaha oo aad soo gudbisaa soo jeedin haddii aad rabto inaad qabato shaqo madaxbannaan madalkan.
Intaa waxaa dheer, Freelancer.com waa mid ka mid ah goobaha ugu wanaagsan ee madax-bannaanida internetka ee bilowga ah.
Fiverr waa madal isku xira shirkadaha leh shaqaalayaal madax -bannaan oo bixiya adeegyo dhijitaal ah in ka badan 300+ qaybood.
Ujeeddada Fiverr waa in la beddelo habka dunidu u wada shaqeyso maadaama ay tahay goob caan ah oo internetka ah oo loogu talagalay adeegyada iskood u shaqeysta, iyadoo shaqooyinku ka bilaabanayaan $ 5.00.
Loo -shaqeeyayaashu waxay la macaamili karaan wariyeyaal karti leh oo ka socda warshado kala duwan oo adduunka oo dhan ah iyagoo adeegsanaya shabakadda.
Intaa waxaa sii dheer, Fiverr wuxuu bixiyaa koorsooyin waxbarasho oo lacag la'aan ah si uu kaaga caawiyo inaad horumariso xirfadahaaga oo aad barato sida loo dejiyo macaamiisha.
#17. Kor u qaadis
Upwork waa degel aad ka heli karto shaqooyin iskood u shaqeysta.
Asal ahaan, Upwork waxay bixisaa shaqooyin kala duwan IT -ga iyo xiriirinta, sayniska xogta, shaqada maamulka, xisaabinta, tarjumaadda, iyo dhinacyo kale.
Waxaad u soo gudbin kartaa fikradaha aan xadidnayn macaamiisha adiga oo adeegsanaya degelkan madaxbanaan ee bilowga ah. Waxaad bixin doontaa 20 % khidmad ah markaad bilowdo inaad la shaqayso macmiil cusub.
Waa degel aad u-saaxiibtinimo u leh dadka cusub.
Shaqaale -bixiye ahaan, waxaad haysataa ikhtiyaaro badan oo aad ku soo qaadan karto shaqadaada xigta, iyo sidoo kale fursadda aad ku shaqayn karto goorta iyo meesha aad rabto.
Waxaan diyaarinay liisaska aagagga ugu madax -bannaan ee ugu wanaagsan ee bilowga ah si ay kaaga caawiyaan inaad gaarto dariiqaaga shaqo ee cusub.
Si kastaba ha ahaatee, waa inaadan ku tiirsanayn shabakadahaan si aad shaqo u hesho mar walba.
Xeerarka aaladahaas iyo qorshayaasha qiimeynta ayaa si joogto ah isu beddelaya. Weligaa ma ogid goorta ama haddii koontadaada loo mamnuuci doono ujeeddo aan la sharixi karin. Ma aha in la xuso xaqiiqda ah inay had iyo jeer jiri doonto madax -bannaan kale oo u tartamaya shirkaddaada.
flexjobs.com - Soo dejinta Macmiilkaaga Koowaad oo Xor ah oo aan lahayn Khibrad
freelancinghacks.com - Waa kuwee Freelancing Site ugu fiican bilowga?
hostinger.com - 18 Shabakadaha ugu Wacan ee Shaqo -doonka ah si ay shaqo u helaan 2022
Sida Loo Noqdo Kalsooni Badan: 15 Talooyin Ugu Fiican Oo La Sameeyo
Mid ka mid ah waxyaalihii kaa reebay inaad raacdo riyooyinkaaga sannado badan ayaa ah…
Sideed dareemi doontaa markaad ogaato in dhammaan waxaad si gaar ah u qabanaysay ay dhab ahaantii ku jiraan…
21 Arrimood oo Xiiso leh oo Saaxiibbada lala Sameeyo Mar Walba
Inaad waqti la qaadato asxaabta waa shay mudan in la sameeyo; waxa ay xoojisaa xidhiidhka oo wanaajiya xidhiidhka...
Aragtida dadweynaha ee sumad kasta ayaa go'aamin doonta sida isticmaalayaashu ay ugu biiraan noocyadan oo kale. Ha u malayn wargeysyadaada…
Noloshu ma laha badhanka joogsiga si ay u qoraan dardaaran marka geeridu timaaddo iyadoo garaacaysa. Ma rabtaa inaad dhimato…
Sida Loo Soo Cesho Farriimihii Facebook Ee La Tiray 2022 | Hannaanka Tallaabo-Tallaabo
Soo kabashada fariimaha muhiimka ah waa hawl adag, gaar ahaan marka ay tahay arrin degdeg ah. Waxaad ugu dambeyntii…